Beads nyebar, China mpanamboatra beads, mpamatsy, factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Home>Products>lamba firakotra>Kitapo fandriana
PVC BAG W
70000-75000set / volana
PREMIUM QUALITY FABRIC - Namboarina tamin'ny alàlan'ny fampiasana volory poly veliratra eo anoloana sy microfiber malefaka any aoriana ho an'ireo alina fararano sy ririnina. Ity farafara farafara faran'izay lafo vidy ity dia safidy tsara indrindra amin'ity ririnina sy fizaran-taona ity!
LAVISH DESIGN & COLORS - Ity singa marobe sy tsy manam-potoana ity dia tonga amin'ny loko vanim-potoana voafantina 3 miaraka amina endriny marindrano ankehitriny izay tsy manam-potoana ary azo ampiasaina ao amin'ny efitrano fandriana, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny na efitrano fandraisam-bahiny. Ny VIBRANT COLORS dia hampifanaraka ny estetika amin'ny efitrano rehetra hanomezana fahatsapana manankarena sy mihoapampana.
ny kalitao avo lenta sy serivisy ho an'ny mpanjifa mahafinaritra. Ny vokatray dia miaraka amina kalitao avo lenta avo indrindra miaraka amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa 100%
Kitapo fanaovana amboradara vita amin'ny kofehy vita amin'ny polyester an'ny Microfiber fotsy vita fotsy ho an'ny hotely
Curtains maizina maizina maizina